प्रकृति हामीलाई "Mujo" सिकाउँछ! सबै चीजहरू परिवर्तन हुनेछ - Best of Japan
जापानको मौसम! चार asonsतुहरु को परिवर्तन मा संस्कृति पोषित >
जापानी टापुमा प्रकृति वसन्त, गर्मी, शरद र जाडोमा एक पारी छ। यी चार asonsतुहरूको क्रममा, मानिस, जनावरहरू र बोटबिरुवाहरू बढ्दछ र क्षय हुन्छन्, पृथ्वीमा फर्कन्छन्। जापानले बुझेको छ कि मानिसहरु प्रकृतिमा अल्पकालीन हुन्छन्। हामीले यसलाई धार्मिक र साहित्यिक कार्यहरूमा प्रतिबिम्बित गरेका छौं। जापानी मानिसहरु लगातार कुराहरु बदल्छन्, "Mujo"। यस पृष्ठमा, म तपाईंसँग मुजोको विचार छलफल गर्न चाहन्छु।
जापानमा जुन, सेप्टेम्बर र मार्चमा बर्खा मौसम छ। विशेष गरी जूनमा वर्षाका दिनहरू जारी रहन्छन्। यदि तपाईं जापानमा हुनुहुन्छ र मौसम राम्रो छैन भने कृपया निराश नहुनुहोस्। धेरै वर्षा दृश्यहरू जापानी कला जस्तै युकिओ-ईमा कोरिएका छन्। त्यहाँ धेरै राम्रा दृश्यहरू छन् ...
जापानले धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्यो
जापानीहरु अझै प्रकृति प्रेम र सिकेको छ
जापानी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शहर। = शटरस्टक
जापानले धेरै प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै ठूलो भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखीको अनुभव गरिसकेको छ
eruptions, र अधिक। नतिजा स्वरूप, हामी राम्ररी जान्दछौं कि चीजहरू स्थायी छन्।
जापानी द्वीपसमूह भूकम्पको क्षतिको जोखिमको लागि भयानक क्षेत्र हो। धेरै मानिसहरू समुद्री तटमा बस्छन्, त्यसैले जब ठूलो भूकम्प गयो तब प्रायः सुनामीको क्षति हुन्छ।
तपाईं जापानी द्वीपसमूह मा धेरै ज्वालामुखीहरु पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले जापानी मानिस प्राय: ज्वालामुखी विस्फोट क्षतिको पनि अधीनमा छन्। ज्वालामुखी विष्फोटले पनि कृषिलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ र यसको परिणाम स्वरूप मानिसहरू भोकमरीबाट ग्रस्त भएका छन्।
यी कारणहरूले गर्दा जापानी जनता प्रकृतिको डरसँग परिचित छन्। मानव प्रकृतिको शक्तिलाई हराउन सक्दैन।
यस तरीकाले जापानी मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि सबै चीजहरु ईफिमेरल हो। यस दर्शनले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न धेरै मन्दिर र मन्दिर निर्माण गर्ने चलन स्थापित गरेको छ।
जापानमा भूकम्प प्रायः देखा पर्छ, साना भूकम्पदेखि लिएर शरीरले ठूलो घातक प्रकोप सम्म। धेरै जापानीहरु प्राकृतिक संकटहरू कहिले हुन्छ भनेर थाहा नहुने स crisis्कटको भावना महसुस गर्छन्। अवश्य पनि, वास्तवमा ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने सम्भावना धेरै कम छ। धेरै जसो जापानी मान्छे सक्षम छन् ...
सुन्दर पुरानो जापानी पारम्परिक लालित्य शैली को दृश्य हिरानो जिन्ज्याइन (तीर्थ) तोरी पाथवे चेरी ब्लास्म्स ब्लीडार्ड (साकुराफुबुकी) रातको समयमा - शटरस्टक
क्योटो, जापानमा साँझमा कमोगावा नदीको साकुरा (चेरी खिलने रूखहरू) = शटरस्टक
कामोगावा नदीमा साकुरा - शटरस्टक
प्रकृति कहिले काँही डरलाग्दो हुन्छ तर एकै साथ यसले हामीलाई धेरै अनुग्रह दिन्छ। साथै, प्रकृति सुन्दर छ त्यसैले जापानी व्यक्तिहरू प्रकोपको साथ सहजीविको कदर गर्दछन्, बरु यसको बिरूद्ध जानु भन्दा पनि।
यस तरिकाले, जापानी घरहरू निर्माण गरिएको छ, प्राकृतिक सामग्रीको उपयोग गरेर। हामीले प्रकृतिको फाइदाको लागि उपयोग गरेर क्षेत्रहरू अग्रसर गर्यौं। धेरै साना जनावरहरू खेतमा बस्छन् र सुन्दर ईकोसिस्टम राख्छन्।
जहाँसम्म जापानको प्रकृतिको सवाल छ, हामीले विशेष गरी चेरीको खिललाई गहिरो प्रेम गर्यौं।
चेरी फूलहरू मानिसहरूका लागि प्रतीक हो कि चीजहरू सबै अल्पकालिक हुन्छन्। चेरी ब्लास्म्स विल्ट हुनेछ र रूखहरु बाट झट्टै फूल्दा ​​तुरुन्तै पतन हुनेछ। कस्तो छोटो जीवन!
चेरी फूलहरू धेरै कठिन खिलछन् उनीहरूको जीवन छोटो भए पनि। जापानीहरु चेरी फूल जस्तै, सुन्दर जीवन बिताउन चाहन्छ।
हामी अवलोकन गर्छौं कि कसरी चेरी खिलने पंखुलीहरू बिखेरिए। हामी यसलाई "हाना-फुबुकी (चेरी) भन्छौं
छरिएका चेरी ब्लासम फूलहरू हाम्रो जमिनमा र नदीमा भेला हुन्छन् र यसले सुन्दर कार्पेटको जस्तो देखिन्छ। नदीले चेरीको फूलहरू फुल्छ र फूलहरू हराउँछन्। जापानी मानिसहरु यस घटना को सराहना गर्छन्।
जापानीहरू प्रकृतिको सौन्दर्य मन पराउँछन्, प्रकृतिले सिकाउने सत्यता बुझ्छन् र हरेक दिन यस फेसनमा बस्दछन्।
"जापानको मौसम" मा फर्कनुहोस्